Magaalo Maraykanka ku taalla oo gabigeedaba lagu gadayo 3.8 milyan oo doolar - BBC News Somali
Magaalo Maraykanka ku taalla oo gabigeedaba lagu gadayo 3.8 milyan oo doolar
Lahaanshaha sawirka Land and Wildlife.com
Magaalada Tiller ee ku taala gobolka Oregon ee dalka Maraykanka ayaa la shaaciyey in gabi ahaanba la iibinayo, waxaana lagu gadayaa lacag gaaraysa 3.8 milyan oo doolar.
Magaaladan oo ku taalla koonfurta Portland inteeda badan ma ahan mid la deganyahay waxayna ku fadhidaa dhul gaaraya 225 mayl.
Waxa la iibinayo waxa ku jira lix guri, dhismo dabaqyo ka kooban, kaalin shidaal iyo dukaan. ku dhowaad 250 qof ayaa ku nool agagaarka meesha la iibinayo
dadkii deganaa magaalada ayaa bilaabay in isaga guuraan ka dib markii uu hoos u dhacay wax soosaarka alwaaxa oo ahaa mid ay ka ganacsan jireen isla markaasna ay beeran jireen, sidoo kalana waxa albaabada loo laabay warshadii ay ku farsamayn jireen alwaaxa, sidaasi waxa sheegay mid ka mid ah dadka ka ganacsiga iibinta guryaha
Magaalada Tiller waxa markii hore la shaaciyey in la iibinayo 2015-kii, balse wakhtigaa iyada ah lagu ma darin waxa la iibinayo iskuul qadiimi ah oo ku yaala magaalada
Laba qof oo keliya ayaa haatan kunool magaaladaasi Tiller- waxayna kala yihiin macalin hawlgab noqday iyo baaderi, waxaana la sheegay in aanan la iibin doonin meelaha ay deganyihiin.
Image caption Magaalada Tiller waxaa ku gadaaman buuro iyo geedaha alwaaxyada laga dhigo
Image caption Tiller, Oregon
Image caption Guri ku yaalla Tiller
Image caption Bakhaarka guud ee Tiller ayaa isna iib ah
Image caption Gudaha dukaanka
Image caption Dugsigii hoose ee magaalada ayaa hoy u noqday deero, haddana waa iib
Image caption Goobtii Jimicsiga ee iskuulka
Marka waxa la isweydiinayana maxay tahay sababta loo iibinayo magaalada?
waxa la sheegayaa in uu jiro qoys iibsaday inta badan dhulkii ay deganaayeen dadka isaga guuray magaalada, kadib markii uu aad u yaraaday suuqii alwaaxa isla markaasna ay hoos u dhacday lacagtii laga heli jiray dowladda federaalka.
dadka sheegay in ay danaynayaan in ay iibsadaan magaaladaasi waxa ka mid ah dhowr maalgashoto oo ka soo jeeda dalka shiinaha, dad doonaya in ay halkaasi ka samaystaan xarumo caafimaad iyo dad doonaya in halkaasi ay ka samaystaan beero